Ogige ebube Dubai | Ogige Ifuru ewepụtara n'ụbọchị Valentine
Ọ bụ ọrụ ebube n'ezie!
Nkeji otu abanye na Dubai Miracle Garden, ọ dị ka ịbanye n'ime ụwa udo na obi iru ala. Ọchịchọ nke gbara gị gburugburu ga-atụgharị uche gị gaa n'ala akụkọ ifo nke ejiri okooko osisi dị iche iche na agba dị iche iche chọọ ya mma. Oge ọ bụla, Ogige Miracle Dubai adịghị atụ anya ma ọ bụ mebie ndị ọbịa na-abịa. Ihe onyonyo a na-adọrọ mmasị n'ezie.
Ịhụ ogige ahụ ka ọ na -ama ifuru nke nwere okooko osisi dị nde 150 karịrị 72,000 agba na ihe na -esi ísì ụtọ na -abịa ndụ bụ ọgwụgwọ. Ogige ahụ dị n'obi Dubailand bụ otu n'ime Obodo obodo's mbinye aka e kere eke na ulo oru na afọ 2013. Ka m na-eje ije n'ogige, m spelbound site agwaogwa nke ụkpụrụ, shapes, na aghụghọ. Akụkụ ọrụ ọ bụla ị na-ahụ n'ụdị atụmatụ bụ nsonaazụ nke ịhụ anya dị ukwuu, nleba anya, na mmezu zuru oke.
Elekere Ifuru – Elekere ifuru nke mita 15 nke ezigbo osisi na ifuru mere bụ ihe a ga-achọ. A na-agbanwe atụmatụ ndị ahụ dịka oge. A na-esi na US ebubata akụkụ elekere nke igwe ahụ ma mepụta ya site na ụlọ ọrụ na-ahụ maka nhazi ala n'ime ụlọ nke Miracle Garden Landscaping.
Mickey Mouse – Ihe owuwu ifuru Mickey Mouse dị ịrịba ama dị mita 18 bụ nke Dubai Miracle Garden chepụtara wee chepụta ya. Ihe ngosi ifuru agwa mbụ Disney na Middle East - na-enweta 5th Guinness Records nke akpọrọ 'Ọdịdị Topiary Kasị Ukwuu' na February 2018. Ihe a kpụrụ akpụ nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ osisi na okooko osisi 100,000, na-atụ ihe ruru tọn tọn 35, ma usoro nchara 7-ton nwere ntọala siri ike nke tọn 50 siri ike.
Nnukwu Egwuregwu Teddy – Ihe owuwu Teddy Bear dị mita 12 bụ otu n'ime ihe nkiri kachasị ọhụrụ na ogige ahụ. Teddy Bear na-ejide obi nke na-ekpughe kpọmkwem na ọ na-agbasa ozi ịhụnanya na nkwekọ.
Paradaịs Efuola - Ọ bụ ahịhịa ifuru dị n'okpuru ala nke nwere omimi nke 20ft - ebe ị nwere ike ịhụ ọtụtụ ụlọ Floral na Bungalows na-enye ọmarịcha ọmarịcha.
Ọdọ Mmiri - Ọdọ Mmiri Park na-enye ume ọhụrụ ikiri, ebe ha na-asachapụ nke ọma na okooko osisi ndị mara mma na isi iyi mmiri na-enye ntụrụndụ maka ndị ọbịa nọ ọdụ n'akụkụ ọdọ mmiri ahụ.
Ngabiga obi – Ụzọ njem obi bụ otu n'ime isi ihe na-abata n'uche ndị ọbịa, mgbe ha gachara Dubai's Miracle Garden. Ngafe nke obi na-enye echiche mara mma na nke na-adịgide adịgide maka ịgagharị, n'ime ọtụtụ nnukwu obi. Obi abụghị naanị ọdịdị nke obi na akụkụ ahụ, kama ha na-enye ọtụtụ puku okooko osisi na-enweghị atụ nke a pịrị apị n'elu ha niile.
Ụgbọ elu A380 - Ọ bụ ihe ịtụnanya botanical, Emirates Airline ejikọtala na Dubai Miracle Garden iji wuo nrụnye ifuru kachasị ukwuu n'ụwa site na ụdị nke Emirates A380, kpuchie na ihe karịrị 500,000 ifuru ọhụrụ na osisi dị ndụ. Mgbe oge ntoju zuru oke, nhazi ụgbọ elu ahụ ga-enwe ọnụ ọgụgụ okooko osisi nde ise na-enwetụbeghị ụdị ya ma tụọ ihe karịrị 5 tonne (ibu nke A100 n'ezie bụ tọn 380).
Okooko osisi - Ọtụtụ nde okooko osisi gbara ya gburugburu na ebe a na -eri nri, Floral Castle a na -enye gị mmetụta dị ka a ga -asị na ị nọ na akụkọ ifo.
Inslọ - Ịkwesịrị izu ike tupu ịga n'ihu hụ ezumike nke ogige mara mma? Ha nwere ọtụtụ cabanas iji jiri akwa na -enwu enwu na ihe mkpuchi ala na -eme jụọ oyi. Ebe zuru oke iji fanye ma zuru ike tupu ịga n'ihu na njem anwansi.
Dubai Miracle Garden's breathing landscaping enwetala atọ Guinness World Records maka ogige vetikal kasị ukwuu na 2013 na ihe ọkpụkpụ ifuru kasị ukwuu n'ụwa na-akpụ ọdịdị nke Airbus A380 na 2016. O were ihe karịrị 144,000 awa ọrụ (ụbọchị 180) site n'enyemaka nke Ndị ọrụ nrụnye 200 na-ewu ya n'ụdị ụgbọ elu Emirates A380. Ihe ndekọ Guinness nke atọ akpọrọ 'Ụwa kachasị ukwuu n'ụwa' bịara na 25 Feb 2018. Ihe ọkpụkpụ nke 18-mita bụ ihe ngosi ngosi ifuru mbụ nke Disney na Middle East ma mee ya site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100,000 osisi na okooko osisi na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 35tons.
Kwa afọ, Ogige Miracle nke Dubai na -eweghachi onwe ya, ebe ha na -ewetara ndị ọbịa ya echiche ọhụrụ na ahụmịhe ahụ. Ndị obodo enyela nkwado nke ya na ndị ọbịa karịrị nde 1.5 kwa afọ. Ogige Miracle bụ otu n'ime mpaghara na ụwa maka ngosipụta pụrụ iche na ebe ntụrụndụ dị oke egwu. Otu ndị ọkachamara na -elekọta ahịhịa na ndị na -elekọta ahịhịa na -elekọta okooko osisi ahụ nke ọma, yabụ ngosipụta ifuru na -ele anya kacha mma n'oge nleta ọ bụla.
Ogige Miracle nke Dubai na-enye ọrụ nka na akụrụngwa gụnyere ebe a na-adọba ụgbọala mepere emepe, ebe a na-adọba ụgbọala VIP, ebe a na-anọdụ ọdụ, ime ụlọ ekpere, mgbochi mposi, ebe a na-asa ahụ, ụlọ nchekwa, ụlọ enyemaka mbụ, ụgbọ ala maka ndị ọbịa nwere nkwarụ, ụlọ ahịa azụmaahịa na kiosk azụmahịa, na ndị ọzọ niile. ọrụ ndị metụtara ya dị iji kwado ndị ọbịa. Ogige ahụ na-enye ihe karịrị ndị na-ere ihe oriri na ihe ọṅụṅụ 30, gụnyere ụlọ ahịa kọfị, ụlọ ahịa swiiti, na kiosk ihe ọṅụṅụ mkpụrụ osisi ọhụrụ.
Ihe niile dị n'ubi Miracle nwere mmetụta 'wow' na ya. Ihe onyonyo a zuru oke na-enye echiche n'uche gị. Nleta n'Ogige Ebube ga -eme ka ọzara yie ihe efu. Ogige dị otú ahụ n'etiti ọzara bụ ọrụ ebube n'ezie.
By eze 21|2022-05-23T17:53:18+05:30February 18th, 2019|blog|Comments Off on Ọ bụ ọrụ ebube n'ezie!